Hadal haynta suuqa kala iibsiga - BBC News Somali
Hadal haynta suuqa kala iibsiga
Oscar Grau oo ah madaxa naadiga kubadda cagta ee Barcelona ayaa sheegay in naadigu uu mar kale isku dayi doono in uu soo sixiixdo Philippe Coutinho oo Liverpool u dheela balse heer Brazil ah.Waxay sheegeen in ay la soo wareegitaanka ciyaartoygan 25 jirka ah isku dayi doonaan bisha Janaayo ee sannadka soo socda. Sida uu ku warramay (Guardian)
Liverpool ayaa sii wadi doonta diidmada in ay Barcelona kala xaajooto la wareegidda Coutinho. (Independent)
Arrintaas mid ka baddalana Liverpool ayaa ogolaatay in Coutinho uu u wareego Nou Camp bisha Janaayo lagana bixiyo 98.6m milyan oo gini. ( Daily Mail oo soo xiganaya Mundo Deportivo)
Tababare Jose Mourinho ayaa diyaar u ah in uu Manchester United u sixiixo qandaraas cusub oo shan sano ah, kaas oo ku kici doona 65 milyan oo gini (Sun)
Ciyaar yahanka Manchester United ciyaaraha u qaabeeya ee reer Spain, Juan Mata oo 29 jir ah ayaa diiday fursad uu ugu wareegi lahaa Horyaalka Shiinaha ee Chinese Super League. (Daily Mirror)
Jack Wilshere oo 25 jir ah khadka dhexena uga dheella England ayaa la fahamsan yahay in uu ka baaraandagayo in uu ka tago Arsenal bisha Janaayo, si uu sare ugu qaado fursadda uu ku heli karo in tababare Gareth Southgate uu u soo xusho Koobka Adduunka. (Mirror)
Ciyaar yahanka dhanka midig ee dambe uga dheela Paris St-Germain, Dani Alves ayaa sheegay "in ay wanaagsanaan lahayd" haddii ay kooxdiisu soo sixiixato Alexis Sanchez oo 28 jir ah oo afka hore ka dheela ama dhaliye ah, kaas oo qandaraaskiisa Arsenal uu ku egyahay dhammaadka xilli ciyaareedkan. (Cooperativa)
Wadahadalladii ay Arsenal qandaraaska oogu kordhin lahayd Mesut Ozil ayaa "si wanaagsan u socda, sida uu sheegay wakiilka ciyaaryahanka reer Jermal ee 28 jirka ah. (Independent)